Qaar ka mid ah Booliiska Soomaaliya oo loo tababaray maareynta socodka gaadiidka - Latest News Updates
Qaar ka mid ah Booliiska Soomaaliya oo loo tababaray maareynta socodka gaadiidka
Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) ayaa qabanqaabiyay koorso 10-maalmood ah oo loogu talagalay saraakiisha booliiska Soomaaliyeed si loo hagaajiyo xirfadahooda maareynta socodka. Tababarka, oo ay ka qaybgaleen 25 askari oo bilays ah, ayaa yimid waqtigii caasimadda ay la kulmayso gaadiidka sii kordhaya ee waddooyinka iyada oo qayb ka ah amniga kor loogu qaaday.
Afhayeenka Ciidamada Booliska Soomaaliyeed, Bashiir Cabdi Maxamed, ayaa ku booriyay saraakiisha in ay xoojiyaan sharciyada waddooyinka iyo nidaamyada kaliya ee aysan ahayn in ay amar ku bixiyaan waddooyinka dadweynaha, laakiin sidoo kale waxay gacan ka geysaneysaa ammaanka magaalada.
General Mohamed ayaa ku booriyay kaqaybgalayaashu in ay isticmaalaan tababarka la bixiyo oo ay u gudbaan aqoonta ay u heleen asxaabtooda.
“Tababarkani wuxuu leeyahay faa’idooyin shakhsi ahaaneed, waana inaad ku xusuustaa nolol maalmeedkaaga. Marka labaad, tababarkani wuxuu qayb ka yahay dadaalka (booliska) ee ciidanka booliska, waxaan rajeyneynaa inaad u isticmaali doonto sidii loo hagaajin lahaa aragtida dadweynaha ee ciidanka booliska, “ayuu raaciyay.
Taliyaha Booliiska ayaa sheegay in baahi loo qabo saraakiisha booliska Soomaaliyeed si ay u xoojiyaan dadaalkooda ku aaddan sidii loo hagaajin lahaa ammaanka dalka ka dib tobaneeyo sano oo colaad ah, taas oo keentay burburkii hay’adaha muhiimka ah. Wuxuu ku booriyay saraakiisha in ay u dhaqmaan si xirfad leh marka ay la macaamilayaan dadweynaha, isaga oo intaa ku daray in ay yihiin sawirka Booliska Soomaaliyeed.
Isagoo ka hadlaya ka qaybgalayaasha, Ku-simaha Iskuduwaha Waaxda Booliiska ee Tababarka iyo Horumarinta BooliiskaLeon Ngulube, ayaa uga mahad-celiyay askartii ka qayb-qaadanayay tababarka, isaga oo sheegay in jimicsigu uu siin doono aqoonta, xirfadaha iyo hab-dhaqanka loo baahan yahay si ay u gutaan waajibaadkooda si waxtar leh.